Pantheon: WordPress culus ama Drupal Hosting oo leh Relic Cusub | Martech Zone
Waxaan haynaa 47 qalab firfircoon oo ku saabsan rakibidda WordPress. Taasi waa waxyaabo badan oo fiilooyin ah, qaar badan oo ka mid ah ayaa laga yaabaa inay hoos u dhigaan waxqabadka WordPress. Waxaan sameynaa qaar ka mid ah tijaabooyinka xawaaraha dhameystiran ka hor intaan la geyn kumbuyuutarrada, ama xitaa waxaan u adeegsan karnaa qaar ka mid ah caqliga si aan si fudud ugu cusbooneysiinno mawduuceena sidaa darteed si dhakhso leh ayuu u socdaa oo canshuur yar ayaa laga saarayaa adeegeyaashayada. Xawaaruhu waa lama huraan maalmahan - labadaba xag xag khibradeed adeegsade iyo xagal habeynta mashiinka raadinta.
Haddii aan wax cabasho ah ka qabay waxyaabaha caadiga ah martigalinta martida, waa in sida caadiga ah aysan kuu oggolaanayn inaad xalliso oo aad aqoonsato weydiimaha iyo hantida iyo sida ay u saameynayaan nidaamka maareynta maareyntaada. Waxyaabaha sida fudud u ah hagaajinta keydka macluumaadkaaga ayaa jari kara waqtiga ay ku qaadaneyso bogaggaaga inay ku shubtaan qayb yar. Pantheon ayaa tan badalaysa!
Pantheon waa madal martigelin heer sare ah oo loogu talagalay WordPress-ka halista ah iyo soo saaraha Drupal. Pantheon ayaa bixisa kooxaha websaydhka dhammaantood aaladaha horumariyaha, martigelinta, miisaanka, waxqabadka, socodka shaqada, iyo otomatiga waxay u baahan yihiin inay dhisaan websaydhyada adduunka ugu fiican.
Maamul Goobaha Si Fudud - Ka maamul dhammaan boggagaaga WordPress iyo Drupal hal dashboard. Wadashaqaynta mashaariicda si fudud xubnaha kooxda.
DevOps Automate - Ka xoroo naftaada dayactirka serverka. U oggolow Pantheon otomaatiga sysadmin inuu shaqeeyo- waxaad diiradda saari kartaa horumarinta websaydhyo waaweyn.
Hawsha Hawsha ee Runtii Agile - Si dhakhso leh oo badanaaba u riix isbeddello. U isticmaal isdhexgal joogto ah nidaamka xakamaynta iyo ka bixida sanduuqa, tijaabada, iyo jawiga nool
Awoodda mideysan ee Pantheon oo lagu daray New Relic Pro, Macaamiishayadu waxay leeyihiin aalado ay ku dhisaan, ku bilaabaan, kuna maamulaan degello yaab leh, si deg deg ah oo aan walwal lahayn, oo leh waxqabadka ugu sarreeya New Relic Pro waa kaamil ku habboon barxadda Pantheon waana ku faraxsanahay inaan bixino horumarkan shabakadda gaarka ah, dhammaadka-dhamaadka iyo Analytics Suite aan lahayn kharash dheeraad ah kuwa isticmaala Pantheon. Zack Rosen, Aasaasihii iyo agaasimihii shirkadda Pantheon
Isticmaalayaasha Pantheon hadda waxay xaqiijin karaan waxqabadka websaydhka ugu badan inta lagu jiro dhammaan wejiyada wax soo saarka - laga bilaabo horumarka illaa daabacaadda nool. Waxqabadka muhiimka ah waxaa ka mid ah:
Muuqaal heer-code ah wuxuu awood u siiyaa dadka isticmaala inay aqoonsadaan sababta asalka u ah arrimaha waxqabadka, illaa wicitaanka shaqada, si loo helo baaritaan hufan iyo xalinta dhibaatada.
Calan dhigista geynta Waxay u oggolaaneysaa horumariyayaashu inay kormeeraan waxqabadka waqtiga oo ay si dhakhso leh u aqoonsadaan astaamaha dhibaatada leh.
Helitaanka Relic Cusub deegaan kasta oo horumarineed - Deegaanka Multidev, Dev, Tijaabinta, iyo Tooska - waxay u saamaxdaa dadka isticmaala inay qabsadaan arrimaha waxqabadka kahor intaysan noolaan oo ay kalsooni ku howlgeliyaan.
Isticmaalayaasha Pantheon waxay heli doonaan marinka New Relic APM Pro isla markaaba waxayna heli karaan waxqabadka goobta Analytics ku yaal dashboardka barxadda Pantheon.
Tags: agilegeynta koodhkadrupalhorumarka drupalNew Relicrelic cusub propantheonmaareynta boggaWordPresshorumarinta wordpressmarti gelinta wordpresswaxqabadka wordpress